कृषि कर्जा बारेमा ।
हाल हल्ला मच्चाउदै नेपाल सरकारले किशन्लाई कृषि कर्जाको बारेमा ठूल्ठूला समाचारले थाउ, पायेको छ तर किशन्ले बैंक धाउनुपर्ने सस्ती पयेको छन जुनसुकै बैंक जादा नि के छ तपाईंको धितो बजारको घर हैग्वेको जागा रे बिचरा किशान्सङ काहाबत होस त्यत्रो porporty यो कस्तो खालको कर्जा हो मोइले बुझिन हो सरकार । अबो बिदेश नगये कहाँ जाने
कसरी लिने यस्तो ऋण? यस्तो ऋण लिन सबभन्दा पहिला फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएको प्यान नम्बर लिनुपर्छ। त्यसपछि कम आधार व्याजदर भएको बैंक छानेर नजिकको शाखामा गई आवेदन दिन सकिन्छ। महिला उद्यमशील कर्जा मागको आवेदन बैंकले उपलब्ध गराउँछ। आवेदनका साथै आफूले गर्ने व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण बैंकले उपलब्ध गराएको परियोजनाको ढाँचामा भर्नुपर्छ। आफू र परिवारका सदस्यको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि चाहिन्छ। बैंकको शाखाले ऋण दिन नमानेमा वा प्रक्रियाबारे बुझाउन नचाहेमा उजुरीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय वा प्रमुख कार्यालयको फोन नम्बर ०१– ४४११४०७ मा फोन गरी वा इमेल gunaso@nrb.org.np मा उजुरी गर्न सकिन्छ।
Commented on : January 23, 2019
sar sachi ma bink dherai gaya banijya bink le hudaina vanx sar mero t darta sabai x gaupalika dekhi samparka gara vanx binkle ani gaupalikale hamilai binkko bare tha hudain vanx k garnu
Commented on : January 24, 2019
euta kura mali pani dhuka lage ko xa sir haru plz mero parsana ko answr gardinius ho hami nepal ko yasto bhubhag ma xum hamro nata jaga ko lalpuraja xa nata kehai xa euat nagarikta xa aba bank ma lon magda ke dheto raknu huxa vanxan ke hami oileni jaga ma basni maxe le bawsayak lon lena ke garnu parxa plz??